रोमी ३ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उज्बेक उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिग्रिन्या टुभालुअन टेटन डिली टोंगन डच डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मराठी मले मल्यालम माया मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वारे-वारे शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन
मत्ती मर्कूस लूका यूहन्‍ना प्रेषित रोमी १ कोरिन्थी २ कोरिन्थी गलाती एफिसी फिलिप्पी कलस्सी १ थिस्सलोनिकी २ थिस्सलोनिकी १ तिमोथी २ तिमोथी तीतस फिलेमोन हिब्रू याकूब १ पत्रुस २ पत्रुस १ यूहन्‍ना २ यूहन्‍ना ३ यूहन्‍ना यहूदा प्रकाश १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६
३ त्यसोभए, कुन कुराले गर्दा यहूदीहरू अरूभन्दा उच्च भए त? अथवा खतना गरेर के फाइदा? २ थुप्रै कुरामा। पहिलो त, तिनीहरूलाई परमेश्‍वरका पवित्र सन्देशहरू सुम्पिइयो। ३ त्यसोभए, कुरा के हो त? कसै-कसैले विश्‍वास गरेनन्‌ भन्दैमा के तिनीहरूको अविश्‍वासले परमेश्‍वरको विश्‍वासीपनलाई बेकार बनाउला त? ४ त्यस्तो कहिल्यै नहोस्‌! सबै मानिस झूटो साबित भए तापनि परमेश्‍वर सत्य ठहरिऊन्‌, किनकि यस्तो लेखिएको छ: “तपाईं आफ्नो वचनमा सही साबित हुन सकोस्‌ र तपाईंले मुद्दा जित्न सकोस्‌।” ५ तर यदि हामीले गर्ने खराब कामबाट परमेश्‍वरको काम न्यायोचित छ भनेर प्रकट हुन्छ भने हामी के भनौं? परमेश्‍वरले आफ्नो क्रोध खन्याउनुहुँदा के उहाँ अन्यायी हुनुभएन र? (एक जना मानिसको दृष्टिकोणले म यो भन्दैछु।) ६ त्यस्तो कहिल्यै नहोस्‌! नत्रता परमेश्‍वरले कसरी संसारको न्याय गर्नुहुनेछ? ७ मेरो झूटले परमेश्‍वरलाई झनै सत्य साबित गर्छ र उहाँको गौरव बढाउँछ भने मलाई किन पापी ठहराइन्छ? ८ अनि “आओ, हामी खराब कुरा गरौं, ताकि असल कुरा प्रकट होस्‌” भनेर हामी किन नभनौं, जस्तो कि, कसै-कसैले हामी यस्तै सिकाउँछौं भनेर झूटो आरोप पनि लगाउँछन्‌। यस्ता मानिसहरूले न्यायोचित दण्ड पाउनेछन्‌। ९ त्यसोभए हामी के ठानौं? के हामी अरूभन्दा उच्च छौं? पटक्कै छैनौं! किनकि यहूदी र ग्रीक* सबै नै पापको अधीनमा छन्‌ भनेर हामीले माथि नै दोष लगाइसक्यौं। १० जस्तो लेखिएको छ: “परमेश्‍वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने मानिस कोही छैन, एक जना पनि छैन; ११ अन्तरदृष्टि हुने एक जना पनि छैन, परमेश्‍वरलाई खोज्ने पनि एक जनै छैन। १२ सबै मानिस तर्किएका छन्‌, तिनीहरू सबै जना बेकामको भएका छन्‌; दया गर्ने कोही छैन, एक जना पनि छैन।” १३ “तिनीहरूको घोक्रो खुला चिहान हो, तिनीहरूको जिब्रो कपटले भरिएको छ।” “तिनीहरूको ओठमुनि विषालु सर्पको विष छ।” १४ “अनि तिनीहरूको मुख सराप र तीता कुराहरूले भरिएको छ।” १५ “तिनीहरूका खुट्टाहरू रगत बगाउन आतुर छन्‌।” १६ “तिनीहरूको बाटोमा विनाश र दुःख छ, १७ अनि तिनीहरूले शान्तिको बाटो थाह पाएका छैनन्‌।” १८ “तिनीहरूको आँखामा परमेश्‍वरको डर छैन।” १९ हामीलाई थाह छ कि मोशाको व्यवस्थाले भन्‍ने सबै कुरा मोशाको व्यवस्थाको अधीनमा हुनेहरूका लागि हो, ताकि कसैले बहाना बनाउन नपाओस्‌ अनि सारा संसार परमेश्‍वरको दण्ड पाउन योग्य होस्‌। २० त्यसैले व्यवस्थाअनुसार चलेर कोही पनि उहाँसामु असल ठहरिनेछैन, किनकि पाप के हो, त्यसको सही ज्ञान व्यवस्थाद्वारा प्राप्त हुन्छ। २१ तर अब व्यवस्था पालन नगरीकन पनि परमेश्‍वरको नजरमा असल ठहरिन सकिन्छ भनेर प्रकट भएको छ, जसको साक्षी मोशाको व्यवस्था र भविष्यवक्‍ताहरूको लेखोट छन्‌। २२ हो, येशू ख्रीष्टमा विश्‍वास गरेर परमेश्‍वरको नजरमा असल ठहरिन सकिन्छ; हो, विश्‍वास हुने जति सबै। यसमा कुनै भेदभाव छैन। २३ किनकि सबैले पाप गरेका छन्‌ अनि परमेश्‍वरका गौरवशाली गुणहरू प्रकट गर्न चुकेका छन्‌। २४ तर परमेश्‍वरले आफ्नो असीम अनुग्रह देखाएर सित्तैंमा उपहारस्वरूप तिनीहरूलाई आफ्नो नजरमा असल ठहराउनुभयो। ख्रीष्ट येशूले तिर्नुभएको फिरौतीद्वारा मुक्‍त गरेर उहाँले तिनीहरूलाई यसरी असल ठहराउनुभयो। २५ येशू ख्रीष्टको रगतमाथि विश्‍वास गरेर आफूसित मिलाप गर्न सकून्‌ भनेर परमेश्‍वरले उहाँलाई बलिदानको रूपमा चढाउनुभयो। उहाँ न्यायी हुनुहुन्छ भनी प्रकट गर्न उहाँले त्यसो गर्नुभयो, किनकि बितेको समयमा तिनीहरूले गरेका पापहरू सहेर उहाँले क्षमा गरिरहनुभएको थियो। २६ वर्तमान समयमा पनि आफू न्यायी छु भनी देखाउन उहाँले त्यसो गर्नुभयो, ताकि येशूमाथि विश्‍वास गर्ने मानिसहरूलाई आफ्नो नजरमा असल ठहराउँदा आफू पनि न्यायसङ्‌गत हुन सकियोस्‌। २७ त्यसोभए घमन्ड गर्ने कुनै कारण छ त? छँदै छैन। कुन व्यवस्थाले गर्दा? कामको व्यवस्थाले गर्दा? त्यसो कदापि होइन तर विश्‍वासको व्यवस्थाले गर्दा। २८ किनकि हामीले यो बुझ्यौं कि व्यवस्थाको कामद्वारा होइन तर विश्‍वासद्वारा मानिस परमेश्‍वरको नजरमा असल ठहरिन्छ। २९ वा के उहाँ यहूदीहरूका मात्र परमेश्‍वर हुनुहुन्छ? के उहाँ अन्यजातिका मानिसहरूको पनि परमेश्‍वर हुनुहुन्‍न र? हो, उहाँ अन्यजातिका मानिसहरूको पनि परमेश्‍वर हुनुहुन्छ। ३० परमेश्‍वर साँच्चै एकै जना हुनुहुन्छ र उहाँले नै खतना भएका मानिसहरूलाई विश्‍वासको आधारमा असल ठहराउनुहुन्छ र खतना नभएका मानिसहरूलाई पनि तिनीहरूको विश्‍वासद्वारा असल ठहराउनुहुन्छ। ३१ त्यसोभए के हामी आफ्नो विश्‍वासद्वारा व्यवस्थालाई खारेज गर्छौं त? त्यस्तो कहिल्यै नहोस्‌! बरु हामी व्यवस्थालाई दह्रो बनाउँछौं।
^ स्पष्ट छ, यसले ग्रीक भाषा बोल्ने गैर-यहूदीहरूलाई बुझाउँछ।
अनलाइन बाइबल पढ्‌नुहोस्